Rivodoza nandrava tany Zimbaboe sy manerana ny Atsimon’i Afrika · Global Voices teny Malagasy
Mihamitombo ny isan'ny maty, mitohy ny fanarenana sy ny fanavotana.
Voadika ny 20 Marsa 2019 6:03 GMT
Nandrava an'i Zimbaboe, Malawi, Mozambika ary Afrika Atsimo ny rivodoza Idai narahina tondra-drano goavana sy ny fihotsahan'ny fotaka sy ny vato. Sarin'ny tondradrano tany Mozambika, nozaraina betsaka tao amin'ny tambajotra sosialy.
Nandravarava tanteraka sy namono olona rehefa nitety an'i Mozambika, Malawi ary Zimbaboe tany atsimon'i Afrika ny rivodoza tropikaly Idai.
Farafahakeliny olona miisa 162 no namoy ny ainy nandritra ilay oram-batravatra nandravarava nanerana an'i Mozambika sy Zimbaboe. Saika voafafa tanteraka ny tanàndehiben'i Beira tao Mozambika.
VAOVAO FARANY: Nandrava sy nanimba ny 90 isan-jaton'ny tanàndehiben'i Beira ny rivodoza izay namely an'i Mozambika tamin'ny herinandro lasa teo, hoy ny Vokovoko Mena raha sady niakatra ho 157 ny isan'ny maty tao amin'ny firenena sy tany Zimbaboe mpifanolo-bodirindrina aminy.
Ity misy sarintany ahitana ny fandalovan'ilay rivodoza :
Ny faritanin'i Sofala, Manica, Zambezia sy Inhambane any Mozambika no tena voa mafy tamin'ny fandalovan'ny rivodoza Idai.
Ny tatitra voalohany no manondro faharavana goavana ao Beira sy ny faritra manodidina, tafiditra amin'izany ny trano rava
Tao Zimbaboe fotsiny no nahitana olona maty miisa 89 farafahakeliny, izay mbola atahorana ny hiakaran'ny antontan'isa, any amin'ny distrikan'i Chimanimani any Manicaland, 406 km any atsinanan'ny renivohitr'i Zimbaboe, Harare, satria dia lasan'ny oram-baratra tropikaly ny trano sy tetezana maro nanomboka ny Zoma teo.
Mbola misy ny olona sasany miezaka miampita ny tetezana ao Chimanimani ao Zimbaboe na dia eo aza ny mety ho zava-doza vokatry ny rivodoza.
Olona mihoatra ny 300 no tsy hita araka ny governemanta.
Nilaza ny Firenena Mikambana ao Zimbaboe fa olona maherin'ny 8.000 no niharan'ny tondra-drano any amin'ireo faritra atsinanan'ny firenena.
“Mampalahelo fa olona maro no namoy ny ainy ary fananana maro no simba ,” hoy ny Firenena Mikambana ao Zimbaboe, tao amin'ny sioka:
Any an-toerana any amin'ny distrikan'i Chimanimani ny Firenena Mikambana ao Zimbaboe sy any amin'ny faritra hafa mba hanampy ireo olona miisa 8.000 niharan'ny tondra-drano sy ny fihotsahan'ny tany vokatry ny rivodoza Idai. Mampalahelo fa olona maro no namoy ny ainy ary fananana maro no simba. Miangavy anareo mba hanaraka tsy tapaka ny fanairana amin'ny alalan'ny hafatra SMS sy ny fampitam-baovao avy amin'ny Fiarovana Sivily.
Araka ny voalazan'ny governemanta, tany Chimanimani no namely mafy indrindra ary nahitana olona betsaka indrindra namoy ny ainy ny rivodoza Idai izay namely ny tanana Ngangu. Trano an-jatony no simba noho ny fianjeran'ny fotaka sy ny vato.
Avy any amin'ny Oseana Indiana ny oram-baratra ary nitarika ny oram-batravatra izay nanomboka tany Mozambika ny Alakamisy, niaraka tamin'ny rivotra manana hafainganam-pandeha 160 kilaometatra isan'ora, ary voalaza fa niteraka onjan-dranomasina tafakatra hatramin'ny 9 metatra ny haavony.
Tsy fantatray ny habetsahan'ny fahasimbana vokatry ny rivodoza Idai- na teo amin'ny olombelona na teo amin'ny zavatra hafa- indrindra tany amin'ny faritra manodidina an'i Beira. Tapaka ny lalana, tapaka ny herinaratra, tapaka ny tambajotra finday. Mety ho ratsy kokoa noho izay fantantsika hatreto.
Nohetsehana hanampy amin'ny famindrana ireo niharam-boina ny polisy sy ny miaramila.
Efa hita nihatsara tanteraka ny fahitana, araka ny filazan'ny minisiteran'ny serasera ary hanampy ireo angidimbin'ny tafika hamindra toerana olona bebe kokoa izany.
Nandefa Ekipa Sangany avy ao amin'ny Tafika Zimbaboeana hanavotra olona.
Naniraka vondro-tafika hafa ny Filoha Edmnangagwa mba hitondra fanampiana sy hamonjy ireo niharam-boina tamin'ny rivodoza Idai.
Hanampy amin'ny fanarenana ihany koa ireo miaramila injeniera
Nilaza ny minisitry ny governemanta Julio Moyo fa hita mitsingevana eny amin'ny renirano ireo razana ankehitriny ary tsy misy zavatra betsaka azo atao amin'izao fotoana izao.
Tapaka ny lalana, ny tetezana ary ny telefônina amin'izao fotoana ary trano an-jatony no rava.
Nilaza ny talen'ny Vokovoko Mena Iraisam-pirenena (IRC) ao Zimbaboe Paolo Cernuschi fa niezaka nanatratra ireo vondrom-piarahamonina voakasiky ny rivodoza ny ekipan'ny IRC ao Zimbaboe saingy henjana ny fahasimban'ny fotodrafitrasa ary tsy tody tany Chimanimani na Chipinge ny ekipa.
“Efa mivoatra ny fanamboaran-dalana maika ka hiezaka indray izahay rahampitso maraina,” hoy Cernuschi.
Miezaka manatratra ireo vondrom-piarahamonina voakasiky ny rivodoza Idai ny ekipanay IRC eto Zimbaboe saingy henjana ny fahasimban'ny fotodrafitrasa ary tsy tody tany Chimanimani na Chipinge ny ekipanay. Efa mivoatra ny fanamboaran-dalana maika ka hiezaka indray izahay rahampitso maraina
Nanangana komity iraisan'ny minisitera ny governemanta ao Zimbaboe tamin'ny Alahady maraina ary nametraka sobakomity miisa 10 taorian'izay hiandraikitra ireo faritra voadona mafy .
Hiandraikitra ireo faritra mifandraika amin'ny fiantohana ara-tsakafo, ny fanampiana ara-pitaovana, ny fiarovana sy ny fialofana, ny fitaterana, ny rano ary ny fanadiovana any amin'ireo faritra hafa voadona mafy ireo komity.
Nilaza ny manampahefana iray avy ao amin'ny Sampan-draharaha misahana ny Famantarana ny Toetr'andro fa efa nihena be ny herin'ny rivodoza ary nivadika avy any atsinanana nankany amin'ny faritra avaratratsinanan'i Zimbaboe.
“Rotsak'orana hatramin'ny 200 milimetatra no voarakitra tao Chipinge [any atsinanan'i Zimbaboe], 118 milimetatra tany avaratr'i Chipinge, ary 102 milimetatra tao Buhera [atsimo-atsinanan'i Zimbaboe],” hoy ilay manampahefana .
Nampitandrina izy fa mety mbola ho tratran'ny tondradrano ny faritra avo any atsinanan'ny firenena noho ny oram-batravatra ary nanoro hevitra ny vahoaka mba tsy handeha ho any amin'io faritra io.
Tsy dia nisy ny orambe tamin'ny Alatsinainy, niaraka tamin'ny orana madinika ary antenaina fa ho tsara kokoa ny toetr'andro manomboka Alatsinainy.
Mbola haharitra ny ezaka fanarenana ary mbola mitohy ny ezaka fanampiana.